Biraj Bhatt - profile and interview
Topic: Biraj Bhatt - profile and interview
Author Topic: Biraj Bhatt - profile and interview (Read 7646 times)
« on: September 12, 2009, 11:16:07 AM »
निर्देशक ऋषि लामिछानेको नजरमा बिराज एकदेखि नौ नम्बरसम्मका हिरो हुन् अर्थात् अरू हिरोका नाम १० नम्बरदेखि मात्र सुरु हुन्छ।
रेखा थापाले बिराज भट्टलाई तीन वर्ष अघि आफ्नो क्याम्पमा नायकको रुपमा प्रबेश गराएकी थिईन्। तर यी दुई बीच लामो समायसम्म सम्बन्ध रहन सकेन। रेखाका तीनवटा चलचित्रमा नायक भएका बिराज त्यसपछि रेखा फिल्मस् क्याम्पबाट बाहिरिए। निखिल र बिराज एकअर्काका प्रतिस्पर्धी कलाकार हुन्। उनीहरू एउटै फिल्ममा सँगै अभिनय गर्न मान्दैनन्। निखिल र बिराजले सँगै फिल्म नखेल्ने कुरा अनौपचारिक हो। तर, निखिलले रेखासँग चाहिँ फिल्म नखेल्ने घोषणा नै गरेका हुन्।
भट्ट त्यसो त साइड डान्सरको रुपमा निकै वर्ष नेपाली चलचित्र उद्योगमा संघर्षरत थिए । त्यो संघर्षको स्वाद एक दशकपछि मात्र पाएका छन् । उनले पहिलो पटक अग्निपथ र मैदानमा एक साथ अभिनय थालेका थिए । तर अहिले यी नायकको प्रशंसाभन्दा पनि कुरा काट्ने व्यक्तिहरु नै बढी देखिएका छन् । अहिले त उनी राजेश हमाल को हो र निखिललाई त चिन्दिनँसमेत भन्न पछि पर्दैनन् भन्ने खबरहरु स्थानीय गसिप म्यागेजिनहरुले छापिरहेका छन् । फुल्ने, दम्भ राख्ने र ठूलो पल्टने कतिपय रुचिका कारण चलचित्र उदोगबाट धिरेन शाक्य, रमेश उप्रेतीजस्ता नायकहरु पाखा लागिसकेको बताउँदै उनलाई सप्रन समय दिनुपर्ने कतिपयको राय छ ।
Interview with Biraj Bhatt:
« Last Edit: March 17, 2015, 01:23:33 AM by anand »
Re: Biraj Bhatt - profile and interview
« Reply #1 on: March 17, 2015, 01:23:52 AM »
मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका बेला नेपाली चलचित्र-जगत्मा द्वन्द्वकलालाई नै आधार बनाएर केही कलाकारले भविष्य चम्काए । सिनेमा हलका पर्दामा गोपाल भुटानी र युवराज लामाको परम्परागत द्वन्द्व हेरिरहेका दर्शकलाई निखिल उपे्रतीले बलिउडबाट ल्याएको कोसेली औधि मन पर्‍यो । बलिउडमा सानोतिनो भूमिकामा 'ट्रेनिङ' लिएका उप्रेतीकै 'ट्रेन्ड' समातेर उक्सिएका कलाकार हुन्-विराज भट्ट ।
वलिष्ठ शरीर र भिलेन कुट्ने भूमिकामा जमेका विराज यतिखेर निखिल उप्रेतीको भरपर्दो विकल्प भएका छन् । हिरो हुन चकलेटी अनुहार चाहिन्छ भन्ने आम मान्यतालाई विराजले गलत बनाइदिएका छन् । 'चकलेटी बान्की नभएकै कारण चलचित्रमा प्रवेश पाउन गाह्रो परेको थियो' विराजले विगत सम्भिmए, 'यस्तो स्वरूप भएको मान्छे हिरो बन्छु भन्छ भनेर धेरैले उडाए त्यतिखेर ।' उनको 'कुस्तीबाज शरीर' यतिखेर नेपाली चलचित्रकर्मका लागि भरपर्दो 'यन्त्र' साबित भएको छ । जो भीरबाट हामफाल्न, मोटरसाइकल उडाउन, आगामा दौडन बिनाहिच्किचाहट तयार हुन्छ ।
पर्दामा 'भिलेन'लाई बेस्सरी कुट्नसक्ने तिलस्मी हिरोको आगमनमा सिट्ठी र ताली बजाउने आमदर्शकको रुचिको नायक बन्न खासै मिहिनेत गर्नु नपरेको अनुभव छ, विराजसित । प्रवेश पाउन मात्र समय लाग्यो भन्छन् उनी । नेपाली सिनेमाले पे्रमकथालाई पछ्याइरह“दा उनी चलचित्रकर्मीको आ“खामा पर्न सकेनन् । जब द्वन्द्वप्रधान चलचित्रले सफलता हात पर्न थाले त्यतिबेला विराजको कला सजिलै बिक्यो ।
नेपाली सिनेमामा द्वन्द्वपक्षको कमजोरी केलाएर बसिरहेका बेला उनले मार्सल आर्टको विषयमाथि बनेको चलचित्र खुकुरीमा प्रवेश पाए । आठ वर्षघि निर्माण भएको सो चलचित्रले सफलता त पाएन तथापि विराजलाई द्वन्द्व गर्न जान्ने कलाकारका रूपमा भने चिनायो । करिब चार वर्षो अन्तरालपछि 'मैदान' नामक चलचित्रमा अभिनय गरेपछि भने पछाडि फर्किएर हर्ेन नपरेको भनाइ छ उनको । आफूलाई माथि उठाउने चलचित्रमा 'अग्निपथ'को नाम लिन पनि उनी भुल्दैनन् । ती चलचित्रको राम्रो व्यापारिक नतिजा पछि शरीरकलामै निखिलको विकल्पका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सके उनले । सानोतिनो 'घरझगडा' मै बोलचाल बन्द हुने नेपाली चलचित्रक्षेत्रको संकर्ीण्ा मानसिकताबीच निखिलको रिस गर्नेहरूको पहिलो रोजाइ बन्ने 'भाग्यमानी' भए विराज । कुनैबेला चल्तीकी हिरोइन रेखा थापा र चल्तीका हिरो निखिल उप्रेतीबीच चलेको 'शीतयुद्ध' मा विराजले राम्रै फाइदा लुटे । अप्रत्यासित सफलताको दम्भमा थापा र उप्रेतीले एक अर्कासित स“गै फिल्म नखेल्ने घोषणा गरेपछि रेखाको 'आइटम एक्टिङ' मा फिल्म हिट बनाउने महत्त्वाकांक्षा राखेका निर्माता-निर्देशकले विराजको विकल्प देखेनन् ।
आफूलाई राम्रो अभिनेताका रूपमा दर्शकले स्विकारून् भन्ने विराजको चाहना छ । तर, द्वन्द्वात्मक भूमिका निर्वाह गरेका चलचित्रले मात्र सफल नतिजा दिलाएपछि चाहनाबाट हटेरै उनी काम गर्न बाध्य छन् । मैदानपछिका चलचित्र देवर बाबु, हिम्मत, अग्निज्वाला, तकदिर र जीवनदातामा ठूलो खतरा मोलेर द्वन्द्व प्रस्तुत गरेको सम्भिmन्छन् उनी । चलचित्र उद्योगीले एक्सन सिक्वेन्सको कल्पना गर्दा हलिउडको कल्पना गरे पनि आवश्यक सामग्री जुटाउन तयार नहु“दा कलाकारलाई फोकटको दुःख आइलाग्ने यथार्थ सुनाए उनले । 'धेरै आशा के गर्ने दर्ुइवटा क्यामेरासमेत जुटाउन नसक्दा एउटै काम दर्ुइचोटि गर्नुपर्ने अवस्था छ,' विराजले भने । डरलाग्दो द्वन्द्व गरेर हिट चलचित्र दिने उत्साहमा थुप्रै चोटपटकको सामना गरेका छन् उनले । 'अग्निज्वालामा आगोमाथि कुद्दा डढेको परेला अझै पलाएको छैन,' उनले भने ।
अहिले पनि जारी रहेको रेखा-निखिल झगडाको फाइदा विराजले निरन्तर उठाइरहेका छन्, अपुतालीझैं । त्यसबाहेक निर्मात्रीपत्नी रेखाकै सहयोगमा उनको होम प्रोडक्सनको दर्ुइ चलचित्र 'हिम्मत' र 'किस्मत' विराजले नै पाए । अझ 'किस्मत'को सफलताले त रेखा फिल्मस्को आगामी चलचित्रमा समेत विराजको सिट सुरक्षित बनाएको छ । त्यति मात्र कहा“ हो र, हिम्मतको सफलताले लोभिएर 'हिम्मत- २' को निर्माणमा लागेका दीपक श्रेष्ठले समेत विराजलाई बिर्सन सकेनन् । कडा शरीर र नरम मिजासको विशेषताले पनि साथ दिएको छ उनलाई । जसको उपज हुन सक्छ अहिलेको अवस्थामा 'आराम गर्ने' बहानामा रित्तो हात बसेका निखिलको भन्दा कैयौ बढी फिल्म छ, विराजसित । कतिसम्म भने आफ्नो र्टर्निङ प्वाइन्ट बनेको चलचित्र 'अग्निपथ'का र्सजक शोभित बस्नेतको चलचित्रमा समेत समय दिनसक्ने स्थितिमा छैनन् उनी ।
भारतको उत्तराञ्चल प्रदेशमा पर्ने देहरादूनमा पढ्न गएको सुदरपश्चिम कैलालीको ब्राम्हण युवा त्यहा आफ्नो शरीर सुहाउदो मार्सलआर्टप्रति आकषिर्त बनेको थियो । करा“ते र तेक्वान्दोमा ब्ल्याक बेल्ट लिएका भट्ट देहरादूनमा बस्दा बडी बिल्डिङ प्रतियोगितामा 'मिस्टर दून' उपाधि जितेको दाबी गर्छन् । त्यही रहदा मोडलिङतर्फमोडिएको करिअरमा अभिनयको भूत सवार भएपछि उनी काठमाडौं आएका हुन् । ढिलै भए पनि अभिनयको स्वाद मजाले चाख्दै छन् उनी । द्वन्द्वकलाको भरमा बनाएको परिचयलाई बिस्तारै अभिनेताका रूपमा मोड्ने दाउ हेर्दै छन् उनी । सधै कठिन भूमिकामा प्रस्तुत हुदा शारीरिक कठिनाइ आइपर्ने अवस्थालाई बुझेका छन् विराजले । उनी अब एक्सन भूमिकाको बदला अभिनय हाबी हुने चलचित्रलाई महत्त्व दिन थालेका छन् ।
« Reply #2 on: March 28, 2016, 11:08:34 AM »
Biography of Biraj Bhatt
« Reply #3 on: August 05, 2016, 11:46:38 PM »
रोज राणा र विराज भट्टको केमेष्ट्री नेपाली सिने क्षेत्रमा बेस्सरी जमेको देखिन्छ । जुन मुभीमा रोज राणाले विराज भट्टलाई लिएका छन । उक्त चलचित्रहरु सफल भएका छन । त्यही कारण हुनसक्छ पाँच वर्ष पछाडि रोज राणा उनै विराजलाई लिएर पर्शुराम मार्फत कमव्याक भएका छन ।
* रोजको नामले चकचकी*
सिने क्षेत्रमा रोज राणाको नामले थर्कमान हुन्छन । रोजको नाममा त्यस्तो के छ ? मुस्कुराउदै उनले सुनाए ‘नाम कामको कारणले गर्दा बन्ने हो ।’रोज राणा यो नामको त्रास नेपाली सिने क्षेत्रमा कस्तोसम्म देखिन्छ भने उनै रोज निर्मित जय पर्शुराम यही साउन २८ गते शुक्रबार देखि देशैभरी प्रर्दशन हुँदैछ । हरेक शुक्रवार हलमा नेपाली सिनेमा जुधाउन आतुर निर्माताहरु जय पर्शुरामसँग भिड्न कोही तयार छैनन । सबै निर्माताहरुको भागाभाग छ । अर्थात मैदान खाली छ । यही खाली मैदानमा गोल हान्ने दाउमा छन रोज । शनिवार एकाविहानै वानेश्वरको इन्द्रेणी क्याफेमा भेटिएका रोजले सुनाए ‘यस्को टे«लर हेरेरै फिल्महलहरुले मुभी माग्न थालिसकेका छन ।’
यस अगाडि नै ६ सिनेमा निर्माण गरिसकेका रोज जय पर्शुरामले राम्रै व्यापार गर्नेमा आशावादी देखिन्छन । कारण हो,चलचित्रमा लिइएका कलाकार । झण्डै पाँच वर्ष पछाडि रोज राणासँगै विराज भट्टको समेत कम व्याक भएको छ नेपाली सिने क्षेत्रमा । बिराज भट्ट, निशा अधिकारी, रबिन तामाङ, धु्रव कोइराला र देशभक्त खनाल जस्ता अव्वल दर्जाका सिनेकर्मीहरुको अभिनय । रोजलाई लाग्छ,यस्मा सबैभन्दा बलियो पक्ष मौनता श्रेष्ठको स्क्रिप्ट । दर्शकहरुमा रोज राणा आफै निर्देशक भएर कस्तो चलचित्र ल्याउला भन्ने कौतुहला पनि त छ । मल्टिफ्लेक्स सिनेमा हलमा विराज भट्ट चल्दैन भन्ने जुन खालको भ्रम छ त्यो चिर्न चाहन्छन रोज । एक्सन प्रधान पर्शुरामको ट्रेलर निस्केसँगै यो भ्रम चिरिसकेको छ उनी सुनाउँछन । अहिले मल्टिफ्लेक्स सिनेमा हल मालिकहरुले यो चलचित्र माग्न थालिसकेका छन ।
*रोज र विराजको कनेक्सन*
चार वटा ओटा सिनेमामा विराज र रोजले सँगै काम गरिसकेका छन । विराज र रोजको केमेष्ट्री यति साह्रो के ले जमिरहेको छ ? के त्यस्तो तत्व छ यि दुईमा ? प्रश्न भुँइमा खस्न नपाँउदै रोजले तर्क तेर्साए ‘ काँचो माटोलाई लिएर मूर्ती बनाउनु भन्दा मूर्ती नै किन्नु मैले उत्तम मान्दछु । विराज भट्ट रेडिमेट चिज हो उसलाई किनेर घरमा लैजाने आनन्दले राख्ने । नयाँ काँचो माटो किन्यो,त्यसकलाई आकार प्रकार दिन झण्झट गरिरहन मन लागेन । विराज भट्ट एउटा स्टार । उनीसँग यस अगाडि नै चार मुभीमा सँगै काम गरियो कामकै क्रममा गाढा मित्रता भयो । मलाई विराजसँग काम गर्ने कम्र्फटेवल विराजलाई म सँग काम गर्न कम्फटेवल । विराज नेपाली सिनेनगरी छाडेर दिल्लीतिर पुगे । यो बीचमा रोजले २ वटा मुभी बनाए । ‘टक्कर दुईमुटुको’ र ‘म छुनि तिम्रो’ । टक्कर दुई मुटुकोमा रोज आफै अभिनेता थिए । यि दुबै सिनेमा फ्लपको सूचीमा दर्ज भयो ।
*जब भ्रमको पर्दा टुट्यो*
यि दुई चलचित्रले असफलता चखाएसँगै रोजको आँखा खुल्यो । सुनाए ‘मलाई त्यति बेलासम्म एक प्रकारको घमण्ड थियो मैले बाहेक अरु कसैले सिनेमा बनाउनै जानेको छैन । मेरो घमण्ड टुट्यो ।’
लगानी उठाउने त परको कुरा लगानीको ५ प्रतिशत व्यापार गर्न सकेन । हो,त्यही पछाडि रोज स्टार राखेर मात्र मुभी बनाउने निष्कर्षमा पुगेका रहेछन । बीचमा ‘हिरोइन’ बनाउन खोजे । यता पनि लफडा भयो । निर्देशककै खुट्टा भाचिँएसँगै यो प्रोजेक्ट पनि अलपत्र पर्यो । यही बीचमा विराज भट्टसँग कुराकानी भए । रोजको प्रस्तावमा विराजले ‘एस’ भनेपछि अनि सुरु भयो पर्शुराममा भिड्ने काम । दाङ जिल्ला आसपासमा सुटिङ गरिएको यो चलचित्रबाटै नेपाली दर्शकले असली चलचित्रको स्वाद चाख्न पाउने उनको दाबी छ ।
*अश्लिताले डुबाउने चिन्ता*
निर्माता संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका रोजलाई लाग्छ ‘अश्लिल सिनेमाको बाढी आएका कारण चलचित्र उद्योग डामाडोल भयो । यही वाढी र भेलले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई डुबाँउला कि भन्ने ठूलो चिन्ता रहेछ राणालाई । अश्लिल चलचित्रको बाढी पछाडि सुरु भएको छ झण्डै झण्डै डकुमेन्ट्री भन्न सुहाँउने चलचित्र बनाउने क्रम । रोजलाई यस्ता डकुमेन्ट्री मार्काका चलचित्रले नेपाली सिने क्षेत्रलाई उकास्ला भन्ने लाग्दैन । भन्छन ‘मलाइ लाग्छ फिल्म भनेको फिल्म नै हुनुपर्दछ । मान्छे उड्नु पर्छ , हिरो हुनुपर्छ म चाहि त्यो टाइपको मान्छे हु । अहिले दर्शकहरुले साच्चिकै फिल्म हेर्न पाएका छैनन् ।त्यसैले पर्शुराम त्यही धारको फिल्म हो । यो सिनेमाको एउटा लाईन हुन्छ , यसको लाईन भनेको हिरो वेसको सिनेमा हो । हिरोइन भनेको फिलर हो त्यसमा आउने नाच्ने हिरोलाइ सपोट गर्ने त्यस कारणले गर्दा पनि हिरोइनको भुमिका कम देखिनु स्वभाविक हो विराभट्टमात्रै हाबि होईन विराजभट्टको साथमा घोडा हाबि छ । लभ स्टोरी सिनेमा भईदिएको भए हिराईन हाबि हुने त्यो लाईन हुन्थ्यो ।
*प्रहरी अफिसर बन्न चाहन्थे रोज*
‘बाल्यकालमा प्रहरी अफिसर बन्छु भन्ने धोको थियो । दोश्रो विकल्प थियोे नायक बन्छु । जीवनका गोरेटोहरु छिचोल्दै प्यूठान देखि काठमाडौं खाल्डोसम्म आइपुग्दा रोजका सपनाहरु पनि बदलिदै गए । काठमाडौं भित्रिए पछाडि उनी डान्स,मार्सल आर्ट र एक्टिङ सिक्न थाले । मार्सल आर्टमा ब्ल्याक वेल्ट हात पारिसकेपछि उनको जीवनका सपनाहरुले डोहोर्याउदै सिनेमा क्षेत्रमा घचेटिदियो । यसरी यो क्षेत्रमा लाग्नुको पछाडि कारण रहेछ, यही बीचमा भेटिए निर्देशक ऋषि न्यौपाने । आफ्नै ठूलो आमाका छोरा ऋषीको मिल्ने साथी । दाजुले भर्खरै एउटा सिनेमा बनाएका रहेछन । रोजले सोधिहाले ‘दाजु एउटा मुभी गर्न कति लाग्छ ?’दाजुले एमाउन्ट सुनाए पछाडि म पनि फिल्म निर्माण गर्न तम्सिए । तर जुन रकममा दाजुले सिनेमा बन्छ भन्नुभएको थियो । उक्त रकममा एक औश काम पनि नहुदो रहेछ । अर्थात एग्रिमेन्टमै उक्त एमाउण्ट सकियो ।
*नशा नशामा सिनेमा*
‘नशा’ भन्ने चीज वडो अजिवको हुन्छ । लागे पछि लाग्यो लाग्यो । रोजलाई सिनेमाको नशा लाग्यो । चलचित्र दादागिरीमा राजेश हमाल, विराजभट्ट, धिरेन शाक्य, गणेश उप्रेती जस्ता दिग्गज कलाकरहरुलाई लिएर काम गरे । यस्को सफलताले हौसिएर अरु पाँच चलचित्र निर्माण गरेका रोज आफ्नो प्रतिक्षीत चलचित्र जय पर्शुरामले सफलताको स्वाद चखाउनेमा आशावादी छन ।